Baaritaan ku taliyey baqtiinta qadka FM sannadka 2022 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guddi ku taliyey in guud ahaanba la baqtiiyo qadka FM. Sawirle: Warsame Elmi/Radio Sweden
Baaritaan ku taliyey baqtiinta qadka FM sannadka 2022
La daabacay måndag 1 december 2014 kl 12.05
Qadka laga sii daayo raadiyaasha ee FM ayaa imminka ah mid guud ahaantiis buuxsamay. Si haddaba loo horumariyo raadiyahana waxaa loo baahanyahay in idaacado badan la hirgeliyo.
Sidaas daraadeed waa in qadka laga siidayo raadiyaha laga bedelo FM laguna badelo digital iyada oo middas la billaabayo muddoo labo sanno gudahood ah. Sidaas waxaa DN-debatt ku qortey maanta Nina Wormbs oo ah iskuduwaha laamaha raadiyaasha.
Nina Wormb ayaa maanta soo bandhigtey baaritaankeeda oo ku sabsan sidii raadiyaasha Sweden qadadka laga siidaayo lagu badeli lahaa digital. Baaritaanka ayey gudoonsiisey wasiiradda dhaqanka Alice Bah Kuhnke oo iyada dowladda u qaabilsan arrimahan. Howlsha baaritankan waxaa Nina Wormbs horey ugu dhiibey xagaagii 2013 wasiiraddii hore ee dhaqanka xukumadii tan ka horeysey.
Qorshaha imminka waxuu yahay in dhowr tillaabo loo maro qaabkii FM-ka looga guuri lahaa looguna guuri lahaa qadka digital-ka iyada oo la adeegsanayo farsamada DAB+. Qorshaha waxaa sidoo kale qayb ka ah baqtiinta guud ahaan qadka FM-ka sannadka 2022 ama sannadka 2024 ugu danbeyn haddii wax u socon waayaan sidii loogu talo galay.